Murdoch University - Hel Waxbarashada Sare ee Australia
City : Murdoch
gaabinta : United
aasaasay : 1975
Ardayda (qiyaastii.) : 22000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Murdoch
Qor at University Murdoch
Welcome to University Murdoch, Perth, Western Australia.
University Murdoch ayaa la caalamku aqoonsan yahay sida hay'ad cilmi-hogaaminayo leh hab dabacsan waxbarashada.
ardayda Our garab cilmi takhasus shaqeeyaan si wax looga qabto caqabadaha caalamka ugu muhiimsan.
qalin lagu doonteen by ganacsiga iyo warshadaha oo sabab u ah waxbarid tayo sare ah, isku degree maaddooyin, cilmi keentay-qarkiisa iyo waxbarasho ku habboon nolosha dhabta ah.
At University Murdoch in Perth, Australia, nahay kuwa kibirka leh in ay leeyihiin in ka badan 22,000 ardayda iyo 2,000 shaqaalaha ka kala 90 dal oo kala duwan leh rabitaan ah in la ogaado, isticmaali fikirradoodii iyo ugu dambeyntii loo kala.
Waxaan u qabsanaysaa fikir xor ah oo dhiiri bulshadeena Murdoch in ay wadaagaan fikrado, aqoon pool oo helo habab cusub oo fikir. Guud ahaan Australia, aan la aqoonsan u leeyahay waxbaridda u fiican, cilmi dhulka-breaking iyo tirada sare ee ardayda ka dhergi.
In Western Australia, our campus South Street ayaa kala duwan oo ka mid ah goobaha ay ka mid yihiin Isbitaalka dhamaystiran xoolaha (kaliya tiyaatarada qalliinka equine WA ee), Warshad pilot injineernimada, rugta lafdhabarta, Arts Media xarunta iyo in ka badan. Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin dhismaha ee Singapore, soo horjeeda Maktabadda Qaranka ee xarun waxbarasho, iyo Dubai halkaas oo ay ardaydayadu u isticmaalaan TV iyo raadiyaha istuudiyaha gobolka-of-the-art, qolalka iyo shidmaan tafatirka.
Waxaan aqoonsaday mid ka mid ah hay'adaha cilmi-baarista keentay Australia, sida warshadaha dheeraad ah meel ay aaminsan yihiin iyo khayraadka galay mashaariicda si ay u siiyaan musharax noo cilmi iyo saynisyahano fursad si uu u sameeyo daahfurtay cajiib ah.
Murdoch u arka fursad ay ardayda in ay ka qayb qaataan sidii qaab muhiim ah oo barashada lagama maarmaan in kasta oo ka mid ah koorsooyinka our in nooc ka mid ah waayo-aragnimo shaqo la xiriirta. The University ee Work Integrated Learning (RABTO) Barnaamijka oo doonaya in ay bixiyaan waayo-aragnimo barasho oo muhiim u ah ardayda, halka ogolaanayo in ay muujiyaan xirfadooda graduate ay loo shaqeeyayaasha.
School of Business iyo Maamul
School of Engineering iyo Information Technology
School of Mihnadaha Caafimaadka
School of Psychology iyo Science Jimicsiga
Sir Walter Murdoch School of Policy Dadweynaha iyo International Affairs
School of Veterinary iyo Life Sciences
Ma rabtaa wada hadlaan University Murdoch ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Murdoch on Map
dib u eegista University Murdoch
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Murdoch.
jaamacadaha kale ee Australia